भोलि राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अदालतले लगायो टिकटक माथि प्र’ तिबन्ध – Paluwa Khabar
अषोज १०, २०७८ आइतबार 23
धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि नेपालमा टिकटक एकाउन्ट ब’ न्द हुदैँ ठिक कि बेठिक?
१३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ ।
यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाकोभनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको हो ।
यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो ।ट्विटरको नियमानुसार १३ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले मात्र टिकटकमा खाता खोल्न पाउँदछन् ।
थपमा (प्रेम काहानी )
एउटै भूगोल, एकै प्रकृति हुँदैगर्दा पनि सिमानाले मेरो अनुभूतिलाई कसरी फरक पार्‍यो ? बाफको रचना गर्भ यही हो । त्यसबेलामा म यात्रामा निस्केको थिएँ । पाइलाभर उता भारत र यता नेपालको जमिन थियो । तर, यसै हेर्दा निकै परसम्म फैलिएको भुटानसम्मको डाँडा, अनि यता नेपालतिरको डाँडा अनि आकाश कतै पनि छुट्टएिको थिएन ।
हुस्सु आफ्नै लयमा गतिशील हुँदै वातावरणसँग मिलिरहेको थियो । एक सुन्दर दृश्य थियो त्यो । यसैक्रममा होटल, यात्रामा सानातिना गफहरूमा सुनिने साना किस्साहरू, देखिने पात्रहरू । मेरो कथाको विषयवस्तु झण्डैझण्डै त्यतिबेलासम्म बनिसकेको थियो ।
जौबारी, सन्दकपुर पहिलोपटक जाँदा त्यहाँको आफ्नै माहोल थियो । पाँच वर्ष पहिले हामी घुम्न गएका थियौँ । त्यसबेला बिहान सूर्योदय हेर्‍यौँ । कञ्जनजंघा हिमाल नै सुनौलो हुने सूर्योदयको त्यो केही पल साँच्चै सुन्दर थियो । यी देखिने कुरा भए तर मलाई होटल सञ्चालन गर्ने मानिसहरूप्रति त्यसबेला चासो भयो । नेपाली झण्डा फरफराइरहेको त्यो होटलको के कथा होला ?
हरेक कुराहरू भनेको सिकाइ हो । कतिपय कुरा म आफैँमा पनि सिक्ने क्रममा छु । कतिपय कामहरू आफ्नै जीवनको लागि अनुसन्धान सरह रहन्छ । कथा भन्नको लागि लोकेसन जति महत्वपूर्ण छ प्रयोग गर्न जान्दा त्यति नै शक्तिशाली पनि । यसपटक लोकेसनलाई मैले अलि बढी खोजेको भनेको चैँ यसले मानवीय संवेदनालाई पार्ने प्रभावसँग हो । थोरै सिनेमेटिक एप्रोच पनि थियो ।
नवीन चौहान ।
अलिकति सहज भएर ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा थोरै सुन्दर कसरी देखाउन सकिएला भन्ने कुरा एउटा थियो । अर्को दार्शनिकरूपमा मानिसहरूलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने पनि । कतिपय कुराहरू भने आपसेआफ सुटिङ्गकै क्रममा विकास हुने कुरा पनि हुन् । यद्यपि, यी सबै कुरा लोकेसनले दिने कुरा हुन् । साँझ र बिहान । दिन र रात । यी बेला काम गर्नुको आफ्नै मजा छ तर यही समयले समेत कथालाई भिडियोमा देखाउँदै गर्दा अनेकन आयामहरू थपिदिइरहेका हुन्छन् ।
तर यसको श्रेय सिर्फ मैले मात्र गरेँ भन्दा अन्याय हुन्छ । दोस्रोपटक मसँग कथा भए पनि म आफैँ धेरै कुरासँग जानकार थिइनँ । सुजन -चापागाईँ) सँग हामी सन्दकपुर गयौँ । जुन कथामा हामी अनुभूतिलाई बुनिरहेका छौँ त्यसको लागि संगीत कल्पना गरेर हुने चिज हो होइन होला, थाहा छैन तर अनुभूतिको सवालमा हामीले वास्तविक स्पेसकै प्रयोग गर्‍यौँ ।
चिसो मौसममा ती स्थानहरूलाई गरिएको अनुभूतिले पक्का फरक पार्छ नै । मैले मेरो स्किृप्ट सकाएँ र सुजनले गीतको कम्पोजिसन । हर्क दाई शब्द लेख्नलाई आउन नसकेपनि वहाँलाई हामीले दैनिक आफूले देखिरहेका दृश्यहरूको फोटो, भिडियो पठायौँ । छतमा बसेर वहाँले पनि आफ्नो लिरिक्स सक्नुभयो । वहाँकै ठट्यौलीमा पारामा भन्दा ‘घाम ताप्दै’ ।
प्रेमलाई सीमाहरूले प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा मेरा लागिचाहिँ पत्याउन गाह्रो छ । नेपाल भाषी भएर पनि हाम्रो नागरिकता फरक छ, हामीले लड्ने अधिकारहरूको सवाल फरक छ
प्रतापसँग आर्टमाण्डुको सम्बन्ध पुरानो हो । उसँग नजिकको सम्बन्ध पनि छ । तर यसमा चिनेकै कारणले ऊ यो प्रोजेक्टसँग जोडियो भन्ने होइन । चिन्नु पनि अलि गहिरो अर्थ लाग्छ होला । मेरो कल्पनामा जस्तो पात्रको चित्र आइरहेथ्यो त्यसमा प्रताप एकदमै मिल्न जान्थ्यो । ऊ अभिनयमा पक्का नयाँ कलाकार त हो तर गर्नै सक्दैन भन्ने हैन । कतिपय कुरामा परिचयले पनि धेरै कुरासँग परिचित गराउँछ । प्रतापसँग भएको सानो घटना यति हो ।
सायद उसले नकारेर सक्दिनँ भनेको भए म कोही अरूलाई राख्थें होला तर उसले पनि नाई भनेन । शायद अभिनय पेसामै आबद्ध कोही अरु प्राथमिकतामा हुन सक्थे होला । तर पात्रको कल्पना गर्दा कलाकारको चित्र पनि आउनुपर्छ । यसमा धेरै ठूलो घटना केही छैन । प्रतापको कामसँग हाम्रो टिम असन्तुष्ट छैन ।
यही कुरालाई जोड्दा पनि हाम्रा धेरै कलाकारहरू स्थानीय व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ । किनकि वहाँहरू त्यहाँको परिवेश, राजनीति, सामाजिक घटनाक्रमसँग परिचित हुँदा हामीलाई यी कुराहरू ब्रिफिङ्ग गर्नभन्दा धेरै सहयोग मिलिरहेको हुन्छ । जस्तो हामीलाई चाहिने धेरै प्रप्सहरू वहाँहरूले नै उपलब्ध गराइदिनुभएको हो । यसको एउटा सानो किस्सा सुनाउँछु ।
हाम्रो कथामा केटी पात्रलाई श्रृङ्गारको लागि कोठा चाहिरहेको थियो । हामीले पाउन सकिरहेका थिएनौँ । यसको लागि त्यहाँका स्थानीयवासीले आफ्नै पूजा कोठा उपलब्ध गराइदिनुभयो ।
आर्टमाण्डुको भावी योजनामा फिल्म निर्माण अवश्य पर्छ र यसको लागि स्थानीयसँग पर्यटक जसरी व्यवहार गरेर हाम्रो मात्र काम निकालेर हुँदैन । वहाँहरूलाई पनि अधिकतम् जोडेर काम गर्न आवश्यक छ । र यसको अभ्यास हामीले सुरुवाती दिनबाटै गर्ने गरेका छौँ । थोरै असहजता कुरा स्वाभाविक हो तर अपनत्वको सवालमा यो तरिकाले हाम्रो काम वहाँहरूको पनि हुनजान्छ ।
मैले भनीसकेँ कि परिचयले धेरै कुरासँग परिचित गराउँछ । हामी बाफको टिममा जो जो छौँ, उनीहरूसँगको चिनजान निकै पुरानो हो । हामी एकअर्काको कामसँग परिचित छौँ । दैनिक जीवनमा हुने हाँसिमजाक वा हुने गम्भीर गफ ती सबमा हामीले एक अर्काको काम गर्ने शैली, क्षमतासँग नजिकिन पाएका छौँ । यो फेरिपनि टिमवर्क हो ।
हरेक कामले हामीलाई केही न केही सिकाएको छ । ‘के माया लाग्छ र’ गर्दैगर्दा जति कुरामा स्पष्ट थियौँ, त्यति नै धेरै कुराहरू छुटेका पनि थिए । ‘तीनपाते’मा हामीले केही नयाँ गर्न खोज्यौँ । तर यसलाई हाम्रो टिमले नवीन कुरा दियो भन्ने हैन । यसमा अझै पनि हामी सिकिरहेका छौँ । र, सिकाइको श्रृङ्खला रोकिन्न नै । काम गर्दै गर्दा के कुरामा हामी बेस्ट दिन सक्छौँ, त्यो एकदम महत्वपूर्ण पक्ष हो । अब बेस्ट दिएपछि यसप्रति भावना आउनु पनि स्वाभाविक हो । यद्यपि, कहिलेकाँही सोचेजस्तो नहुन सक्छ । तर यसैमा निराश हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
आर्टमाण्डुको सुरुवातको पृष्ठभूमि नै यही हो । हामी यहाँसम्म आउनको लागि गरेको यात्रा लामो प्रयासहरू प्रतिफल हो ।
हाम्रोमा विभिन्न प्रकारका बहसहरू चलिरहेकै छन् । हुर्काइको फरक पृष्ठभूमिका कारण मेरो आफ्नै बुझाइ बनेको छ । प्रेम भन्ने बित्तिक
Prevआगोलागिमा परि देउवा को मृ’ त्यु
Nextभोलि राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अ,दालतले लगायो टिकटक माथि प्र’ तिबन्ध
काठमाण्डाै महानगरकाे बेईजेत भयाे भन्दै खुलामञ्चमा निशुल्क खाना बाड्न महानगरकाे प्रतिबन्ध
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस र पुण्य प्राप्त गर्नुहोस